shidaal | Somaliland.Org
Tag Archives: shidaal
Koru kaca Shidaalka oo labanlaabay qiimaha lagu raaco Basaska magaalada Hargeysa iyo jawaab xukuumaddu ka bixisay
April 23, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Lacagta lagu raaco gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya magaalada Hargeysa ayaa maanta la kordhiyey labanlaab kadib markii shirkadda TOTAL kordhisey qiimaha Shidaalka. Basaska ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Hargeysa oo lagu raaci jirey SL.Shs 1,000 (Kun Somaliland Shillings ah) ayaa saaka gaadhey Sl.shs. 2,000 (Laba Kun oo Shilin), taas oo ah […]
April 12, 2008	Oslo/Asker, Norway (ABN Newswire/Thomas Financial/Ogaal) – Shirkadda Sarfayga Shidaalka TGS-NOPEC Geophysical Company (TGS) ee Noorwayjiyaanka ah, ayaa shalay shaaca ka qaaday inay soo gebogabeeyeen hawlgallo ay Somaliland ka wadeen. Sidaana waxa lagu shaaciyay shabakaddaha caalamiga ah qaarkood, oo soo xiganayay shir jaraa’id oo masuuliyiinta shirkaddaasi ay qabteen. Sida lagu faafiyay shabakadda wararka ABN Newswire Shirkadda […]